काठमाडौं, २ पुस । गत शुक्रबार नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य कटसिनास्थित स्कूलमा भएको आक्रमणपछि ३०० भन्दा बढी बच्चाहरू हराइरहेको रिपोर्टहरू प्राप्त भएका थिए ।
सरकारले विद्यालयमा भएको आक्रमणको लागि आपराधिक गिरोहलाई दोष दिएको थियो तर मंगलबार शक्तिशाली इस्लामिक चरमपन्थी समूह बोको हरामले यसको जिम्मेवारी लियो । यसपटक बोको हरामले लक्षित गरेको स्कूल छात्रहरुको बोर्डिङ स्कूल थियो ।
यस स्कूलमा ८०० बच्चाहरूको नाम दर्ता छ । धेरै बच्चाहरू आक्रमणको क्रममा भागेका थिए जसमध्ये केहीले ज्यान जोगाएर घर फर्किएका छन् भने धेरै बालबालिका हराइरहेका छन् त्यसकारण उनीहरु अपहरणमा परेको आशङ्का गरिएको छ ।
बोको हरामले नाइजेरियास्थित एक स्कूलका बच्चाहरूलाई अपहरण गरेर एकपल्ट फेरि विश्वलाई चकित पारेको छ। सन् २०१४ मा यो इस्लामी कट्टरपन्थी समूहले २०० भन्दा बढी युवतीहरुलाई अपहरण गरेसकेपछि कुख्यात भएको थियो ।
नाइजेरियामा बोको हरामको डरलाग्दो उपस्थिति एक दशकभन्दा बढी समय फस्टाइसकेको छ। अपहरण, सेना र आम जनतामा उनीहरूको निशाना रहँदै आएको छ ।
नाइजेरियामा सेना र बोको हरामबीचको द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै यस युद्धमा हजारौं मानिस मारिए र लाखौंले आफ्नो घर छोड्नु परेको वा अन्यत्र शरण लिनुपरेको छ ।
सरकारले भने बोको हरामको शक्तिलाई धेरै हदसम्म कमजोर पारेको दाबी गर्दै आएको छ, तर नाइजेरियाका धेरै मानिसहरु सरकारको यस दाबीलाई विश्वास गर्न हिच्किचाउँछन् । उनीहरूका लागि बोको हराम आज पनि एक शक्तिशाली समूका रुपमा यथावत् छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार सन् २०२० को पहिलो ६ महिनामा देशको उत्तरी क्षेत्रमा ११०० भन्दा बढी मानिस ‘डाँकु’को हातबाट मारिएका छन् । यद्यपि यी सबै घटना बोको हरामाकै संलग्नता छ भनेर यकिन भन्‍न भने सकिँदैन ।
बीबीसी अफ्रिकाका क्रिस इवोक भन्छन्, ‘नाइजेरियाको सेनाले बोको हरामलाई नष्ट गरेको बताएको छ तर यसको बाबजुद सैनिक र आम नागरिकमाथि यो चरमपन्थी संगठनको आक्रमण जारी छ ।’
बोको हरामको कथा कसरी सुरु भयो ?
यो सुन्नी जिहादी समूहको उदय सन् २००२ मा उत्तरी नाइजेरियामा भएको थियो । उत्तरी नाइजेरियाको यो क्षेत्र मुलुकको मुस्लिम जनसंख्या भएको क्षेत्र हो । अफ्रिकाको धनी देशहरूमा गणना गरिने नाइजेरियाको यो सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो ।
धेरै मानिसहरू बोको हरामको उदय नाइजेरिय भित्रको दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रहरु बीचको अव्यवस्थासँग जोडेर देख्छन् ।
मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद युसुफले नाइजेरियामा शरिया कानूनलाई विश्वास गर्ने सरकार गठन गर्ने मनसायले यो संगठन गठन गरेका थिए भनेर भन्‍ने गरिन्छ ।
बोको हरमको रुपमा जसले इस्लामलाई बढावा दिन्छ, मुस्लिमलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक वा सामाजिक गतिविधिमा भाग लिन अनुमति छैन जुन पश्चिमी जीवन मूल्य र शैली वा मतदान वा धर्मनिरपेक्ष शिक्षाबाट प्रभावित छ।
यूसुफले यसका लागि मस्जिद र मदरसा बनाए तर उनको संगठनको चासोको दायरा शिक्षाको क्षेत्र बाहिर फैलियो । उनको राजनीतिक उद्देश्य इस्लामिक राज्यको स्थापना थियो र त्यो मदरसा चाँडै नै जिहादी भर्ती केन्द्रमा परिणत भयो ।
बोको हरामले कसरी काम गर्छ ?
सन् २००९ मा बोको हरामले उत्तर पश्चिमी नाइजेरियाको बोर्नो राज्यको राजधानी मादुगुरीमा पुलिस स्टेशनहरू र सरकारी भवनहरूमा थुप्रै आक्रमण गर्‍यो । यस आक्रमणमा बोको हरामका धेरै समर्थक मारिए र हजारौं चरमपन्थी शहरबाट भागेका थिए ।
नाइजेरियाका सुरक्षा बलहरूले बोको हराम मुख्यालयको नियन्त्रण लिएपछि धेरै कट्टरपन्थी लडाकूहरू पक्राउ परेका थिए र उनीहरूका नेता मौलवी युसुफ मारिए ।
यसपछि, सुरक्षा बलहरुले टेलिभिजनमा मौलवी युसुफको शव देखाएर बोको हराम समूहको नाश भएको बताएका थिए । तर बोको हरामका लडाकुहरू आफ्ना नयाँ नेता अबु बक्र शेखुको नेतृत्वमा पुनः संगठित भए ।
अबो बकर शेखु
यस कट्टरपन्थी संगठनको आक्रमण थप बढ्न थाल्यो । सन् २०१३ मा बढेको हिंसाको परिणामस्वरूप नाइजेरियाले बोको हराम प्रभावित राज्यहरूमा आपतकाल लगाउने घोषणा गर्‍यो ।
सोही वर्ष, बोको हरामलाई संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा कट्टरपन्थी संगठन घोषणा गर्‍यो । अबो बकर शेखुको नेतृत्वमा बोको हरामका क्रूर विधिहरू कुख्यात भए ।
सर्वसाधारणमाथि बम विष्फोटन, बच्चाहरूलाई आत्मघाती बमोजिमको रूपमा प्रयोग गर्ने, विद्यालयहरूबाट अपहरण गर्ने घटनाहरू यस क्रममा भएका थिए । शुक्रबारको अपहरणको घटना कात्सिना प्रान्तमा भएको थियो ।
बोको हराम कत्तिको शक्तिशाली छ ?
बोको हराम नाइजेरियाको उत्तरी पूर्वी क्षेत्र र ताल चाड क्षेत्रमा सक्रिय छ । बोको हरामले मेसेजिंग अनुप्रयोग ‘टेलिग्राम’ मा यसको आधिकारिक खाताहरूबाट प्रचार प्रसार गरिरहेको छ।
यद्यपि शुक्रवारको अपहरणको घटनामा बोको हरामको दाबीले नयाँ मोड ल्याएको छ । पत्रकार क्रिस इवोक भन्छन्, ‘यसले बोको हरामको सक्रियताको दायरा अब देशको उत्तरपश्चिमी भागमा फैलिएको छ ।’
यद्यपि बीबीसी नाइजेरियाका पत्रकार इशाक खालिदले भनेका छन् कि केही व्यक्तिले अबु बकर शेखुको दाबीलाई अपहरणको घटनालाई लिएर प्रचार प्रसार गर्ने षड्यन्त्रका रुपमा लिएका छन् ।
खालिदलाई लाग्छ कि बोको हराम पश्चिम अफ्रिकामा रहेको कट्टरपन्थी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट’ को सानो समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ र यो दाबी पनि उही रणनीतिको परिणाम हुन सक्छ।
खालिद भन्छन्, ‘अधिकारीहरूले यस आक्रमणको लागि जिम्मेवार मानिसहरुको खोजी गरिरहेका छन्, तर यस घटनापछि उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा बच्चाहरूको सुरक्षाको बारेमा अभिभावकको चिन्ता पनि बढेको छ।’
शान्ति पुनःस्थापनाको प्रश्‍न ?
कात्सिना प्रान्तका गभर्नरले भनेका छन् कि उनीहरु आक्रमणकारीहरुसँग सम्पर्कमा त थिए तर अपहरणकर्ताले पैसा मागेका छन् वा उनीहरुका कट्टरपन्थी साथीहरुलाई बच्चाहरुको रुपमा छोड्ने कुरा भएको हो भन्‍नेबारे चाहिँ अज्ञात छन् ।
असुरक्षाको अनुभूति नाइजेरियालीहरूका लागि एक ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
खालिद भन्छन्, ‘मानिसहरूलाई कुरा बनाउनको लागि बढी कुरा चाहिन्छ । तिनीहरू यस कुराको भरोसा गर्न चाहन्छन् कि सरकार बचाउको पक्षमा नभई प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ।’
यद्यपि विश्वको द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरुमा विशेषज्ञता राख्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहले विश्वास गर्दछ कि कडा सैन्य कारवाहीले शान्ति पुनःबहाली गर्न सक्दैन । उनीहरुको यस धारणाअनुसार यसको विपरित परिणाम हुन सक्छ ।
–बीबीसी ग्लोबल संस्करणबाट, भावानुवाद- साझापोस्ट